Asi vatanga nema pena?
Wife waking up at halftime, Brazil yakabaiwa ne Germany 5:0,
Wife: aarghhh, asi nhasi vatanga nema pena?
Husband: iwe, rara uko!!
world cup brazil-vs-germany wc2014
brazil yakabaiwa 7-1 ne germany
Nhai ichokwadi here kuti doro re 7days rakunzi Brazil?
internet kumusha inda
Goshy akabatwa neBabylon (mapurisa) etraffic achityaira Peugout 404 yake. Akabvunzwa chitambi zvikanzi hapana. Ridza hooter hapana, indicators hapana, handbrake hapana, mutero hapana. Zvikanzi mhosva dzako dzawandisa takuregerera enda hako. Kwakuramba akamira zvikanzi naofficer ko uchiri wakamirirei ipapo? Goshy akapindura nekanzwi kairatidza kuzvininipisa zvikanzi, "ndinokumbirawo push"
gudo mhuka danda